Wasiir Xirsi Oo Shahaado sharaf gudoon siiyay Xildhibaanada Baarlamaanka UK ee taageera Somaliland | Somaliland.Org
Wasiir Xirsi Oo Shahaado sharaf gudoon siiyay Xildhibaanada Baarlamaanka UK ee taageera Somaliland
November 6, 2012	“Waxaad qeyb ka noqonaysaa Taariikhda Somaliland Oo la idinku xusi doono”
LONDON (Somaliland.Org)- Wasiirka Madaxtooyada Somaliland Md. Xirsi Cali X Xasan oo socdaal ku jooga dalka Ingiriiska, ayaa booqday Uk House of Commons shahado sharafna guddoonsiiyay Xildhibaan Tony Baldry oo ah xubnaha u ololeeya qaddiyadda Somaliland.
Wasiirku Madaxtooyaddu waxa uu xaruntaasi shir kula yeeshay Xildhibaan Tony Baldry oo ah xubnaha u ololeeya qaddiyadda Somaliland, waxaana goob joog ka ahaa Safiirka Somaliland u fadhiya dalkan UK mudane Cali Aadan, xubno ka kala socday jaaliyadaha Soamaliland ee gobolada iyo magaalada London.
Wuxuu ugu bushaareeyay Wasiirka iyo jaaliyadaba in la gaadhsiiyo umada reer Somaliland in uu ku soo biiray groupkan Somaliland taageera wasiirkii hore ee Comonwealthka mudane Henry Bellingham taas oo ah guul cusub oo uu gaadhay ururkan taageera Somaliland. Mr Baldry waxu sheegay inay rajaynayaan in ay dhowaan Somaliland gaadhi doonto himiladeeda aqoonsi raadinta ah, ayna hayso wadadii ugu haboonayd. Waxa hadalka qaatay .
Wasiirka Madaxtooyada Somaliland Md. Xirsi Cali ayaa u sheegay inay Somaliland xukuumad ahaan iyo qaran ahaanba abaal u hayso isla markaana bogaadinayso Mudaneyaasha Baarlamaanka Ingiriiska.
Wasiirku waxa uu sheegay in xildhibaanadani ay qeyb ka yihiin taariikhda Somaliland oo shacbiga Somaliland xasuusan doonaan.
“Dawlad iyo shacab ahaanba waanu soo dhawaynaynaa Wasiirkii hore ee Comonwelthka mudane Bellingham inuu ku soo biiray ururkan taageera Somaliland. Waxaan idiin sheegayaa inaad taariishda Somaliland qayb ka noqon doontaan oo la idin xusi doono.waxaanad ka mid noqonaysaan halgameyaasha Somaliland,”ayuu yidhi Wasiirka Madaxtooyadda Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan.
Waxa soo geba gebeeyey hadalka Safiirka Somaliland u fadhiya dalkan UK mudane Cali isagoo sheegay inay xidhiidh dhow la leeyihiin ururkan ayna sii xoojin doonan iskaashiga ka dhaxeeya.
Previous PostSuldaan Baane oo Baaq u jeediyay Komishanka iyo AxsaabtaNext PostMurashaxa madaxweynaha UCID oo khudbad u jeediyay Taageereyaashooda Burco	Blog